Global Voices teny Malagasy » @ActLenguas : Yásnaya Elena Aguilar Gil no mitantana hatramin’ny 20 Janoary 2019 · Global Voices teny Malagasy » Print
@ActLenguas : Yásnaya Elena Aguilar Gil no mitantana hatramin'ny 20 Janoary 2019
Voadika ny 15 Janoary 2019 2:03 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Gwenaëlle Lefeuvre, avylavitra
Ny taona 2019, nanapaka hevitra izahay ny hanasa vahiny isankarazany  hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas  sy hizara ny zavatra niainan'izy ireny momba ny famelomana indray ary fampiroboroboana ny tenindreniny. Hazavain'i Yásnaya Elena Aguilar Gil amintsika ny zavatra kasainy horesahana mandritra ny herinandro natokana ho azy, ny 14 hatramin'ny 20 janoary.
Rising Voices (RV) : Azonao ampahafantarina anay ve ny momba anao?
Yásnaya Elena Aguilar Gil no anarakao ary avy any Ayutla Mixes, fanjakan'i Oaxaca, ao Meksika. Mpahay momba ny teny aho ary ny mixe, teny mixe-zoque no tenindreniko. Ny tenindreniko no iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ao Oaxaca ary misy hamaroana manandanja ao anatiny. Misy efatra ireo hamaroana/karazana fototra hita ao aminy ary miovaova arakaraky ny vondrom-piarahamonina. Miasa amin'ny fanapariahana ny torohay momba ny hamaroan'ny teny sy ny dingana mitondra mankany amin'ny fahafatesan'ny teny iray aho. Mahaliana ahy ny fandinihana ny fitsipi-panoratana, ny teny eny anaty tambajotran-tserasera ary ny dingan'ny fanoratana sy ny famakiana teny.
RV : Aiza ho aiza ny toerana misy ny teninareo ankehitriny ao anatiny sy ivelan'ny aterineto?
Toy ny any amin'ny ankamaroan'ireo renivohitra monisipalin'ny faritra mixe, iharan'ny fikisahana ankehitriny ny tenin'ny vondrom-piarahamonina misy ahy. Hita sy ampiasaina ao amin'ny aterineto izy, saingy mbola mila bebe kokoa mihoatra noho izany.
RV : Lohahevitra toa inona no ho ampitainao ao amin'ny kaonty @ActLenguas ?
Momba ny hamaroana sy fahasamihafàn'ny teny ary ny dingana mitondra mankamin'ny famoizana azy ireny, ary koa ireo hetsika santatra izay manome safidy ahafahana misoroka io famoizana io.
RV : Inona no hery manosika ny fikatrohanao ho an'ny teny mixe ?
Inoako fa ny fahafatesan'ny teny dia arahana foana fanitsakitsahana ny zo maha-olona sy dingana ara-tantara ary ara-politika, ary ny fanomezana aina indray ireny teny ireny dia midika fampitsaharana io fanohintohinana ny zon'ireo vondrona manokana io.
RV : Inona no antenainao ho an'ny teninareo?
Antenaiko hahazo tanjaka izy, hanohy hiaina ary ho ampiasaina amina habaka midadasika kokoa. Ho an'ireo vazimba teratany manerana izao tontolo izao dia faritàny fanaovana fanoherana ny teny rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/15/133567/
 nanapaka hevitra izahay ny hanasa vahiny isankarazany: https://rising.globalvoices.org/campaigns/twitter-actlenguas-2019/